Alahady – 06/07/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany : Bokin’i Zakaria Mpaminany Zak. 9, 9-10
Indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao manetry tena
Hoy ny Tompo hoe : “Mifalia amin’ny hafaliana lehibe, ry zanakavavin’I Siona ! Manaova feo firavoravoana, ry zanakavavin’I Jerosalema ! Fa indro ny Mpanjakanao avy ho aty aminao ; marina Izy sady arovan’Andriamanitra ; manetry tena mitaingina ampondra, dia ampondra tanora, zanak’ampondravavy. Hofoanako tsy hisy ny kalesy fiadiana any Efraima, mbamin’ny soavaly ao Jerosalema. Ary hopotehina ny tsipîka fiadiana. Hilaza fiadanana amin’ny firenena Izy ; ny Fanjakany dia hahatratra ny hatramin’ny ranomasina ka hatramin’ny ranomasina ; ary hatramin’ny ony ka hatramin’ny faran’ny tany.
Vakiteny faharoa : Taratasin’I Md Paoly Apôstôly ho an’ny Kristianina tany Rôma Rôm. 8, 9. 11
Raha vonoinareo amin’ny Fanahy ny asan’ny nofo, dia ho velona ianareo.
Ry Kristianina havana, ianareo dia tsy ao amin’ny nofo, fa ao amin’ny Fanahin’Andriamanitra.Raha misy tsy manana ny Fanahin’I Kristy, dia tsy an’I Kristy izy. Ary raha ny Fanahin’izay nanangana an’I Jesoa ho velona no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an’I Kristy Jesoa koa no hamelona ny vatanareo mety maty, noho ny Fanahiny izay mitoetra ao aminareo. Koa amin’izany, ry Kristianina havana, tsy mpitrosa amin’ny nofo isika, ka ho velona ara-nofo. Satria raha velona ara-nofo ianareo, dia ho faty ; fa raha vonoinareo amin’ny Fanahy ny asan’ny nofo, dia ho velona ianareo.
Evanjely Masina nosoratan’i Md. Matio Mt. 11, 25 – 30
Tamin’izany andro izany I Jesoa niteny nanao hoe : “Misaotra Anao Aho, Raiko, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nanafina ny hevitrao tamin’ny hendry sy ny be saina Ianao, ary nanambara azy tamin’ny tso-po kosa. Eny, misaotra Anao aho, Raiko, fa izany no sitra-ponao. Efa nomen’ny Raiko Ahy ny zavatra rehetra ary tsy misy mahalala ny Zanaka afa-tsy ny Ray ; ary tsy misy mahalala ny Ray afa-tsy ny Zanaka sy izay tian’ny Zanaka hanehoana Azy.Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay mitondra fahoriana sy vesaram-pijaliana, fa hanamaivana anareo Aho. Ento ny jiogako, ary mianara amiko, fa malemy fanahy sy manetry tena ao am-po Aho, fa mora entina ny jiogako, ary maivana ny didiko.